Looks Nepal | » “सबैलाई माया बाँड्न सकुँ”– मौसमी खनाल (मोडल) Looks Nepal “सबैलाई माया बाँड्न सकुँ”– मौसमी खनाल (मोडल) – Looks Nepal
Oct, 31, 2021	looksnepal
– आजकल मोडलिङ सँगसँगै म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा व्यस्त छु ।
० मोड्लिङ क्षेत्रमा बाहेक अरु के मा व्यस्त हुनुहुन्छ?
– मोडलिङ क्षेत्र बाहेक आजकल व्यापार व्यवसायमा व्यस्त छु ।
मौसमी खनाल (मोडल)
– मलाई सुखमा भन्दा पनि दुःखमा बढी साथ दिने, सहयोगी भावना भएको र सकारात्मक सोच भएको साथीहरु बढी रुचाउँछु । मेरो मिल्ने साथीहरु सम्झिनुपर्दा गायक दिनेश गौतम, राज केपी र कृष्ण पौडेल हुन् ।
– मलाई आधुनिक, गजल, क्लासिकल, फिल्मी म्यूजिक, पप गीत संगीत मनपर्छ । मलाई मनपर्ने गायक दिनेश गौतम हुनुहुन्छ । वहाँको ‘पैसा कसले बनायो….’ भन्ने गीतले मन छोएको छ किनभने यो गीतले मेरो मात्र हैन हजारौं संगीतप्रेमीहरुको मन छुन सफल भएको थियो । यो गीतमा समाजमा भएको यथार्थताको चित्रण गरेको छ । ‘यो संसारमै महंगो त पैसा रहेछ, वैंशको माया पैसाको छेउमा बिक्दो रहेछ, गिर्नु परेसी मान्छेहरू हदसम्म गिर्दोरहेछ…’ यस्तै निकै नै मार्मिक शब्दहरू एवम् संगीतले भरिपूर्ण यो गीत ले मन छोएको हो ।
– मलाई क्याजुअल ड्रेसअप मनपर्छ । म आफूलाई क्याजुअल ड्रेसअपमा आफूलाई सहज महसुस गर्छु । म सँग प्रायः क्यासुअल, वेस्टर्न एवम् सांस्कृतिक ड्रेसहरु छन् ।
– म प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण भएको ठाउँ बढी रुचाउँछु । मलाई नजिकै मनपर्ने गन्तव्य गोदावरी हो भने अलि टाढा जानु पर्दा चाहिँ पोखरा, मनाङ, मुस्ताङ हो ।
– मलाई मनपर्ने खाना हाम्रो नेपाली परिकार नै हो । मलाई लेमोनेड र ग्रीन–टी पेय पदार्थ मनपर्छ । म प्रायः आफै खाना पकाउने गर्छु । म मासुको परिकार मीठो बनाउँछु ।
– मलाई स्व. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित मुनामदनले मन छोएको थियो । मैले दोहोराएर पढेको किताब चेतन भगत को “द थ्री मिस्टेक अफ लाईफ” हो । मैले सरस्वती प्रतीक्षाद्वारा लिखित नथिया नामक किताबको बारेमा धेरै सुनेको छु तर पढ्न पाएको छैन ।
– विवाह एक पारिवारिक जीवन प्रारम्भ र सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । विवाहपछि विवाहित महिला र पुरुषको हक, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व सबै विवाहित घरपरिवारतर्फ निश्चित हुने हुनाले विवाहको महत्व धेरै छ । सेक्स भनेको दाम्पत्य जीवनको एउटा नैसर्गिक क्रिया हो । यसलाई जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा लिन सकिन्छ । यो मानव शरीरको एउटा प्राकृतिक हिस्सा हो, जसरी हामीलाई शरीरमा हुने विभिन्न परिवर्तनका लागि उपयुक्त खानपिन, रहनसहन, वातावरणको आवश्यक पर्छ भने यो पनि मानव शरीरका लागि आवश्यक छ । म एक विवाहित महिला हुँ । तैपनि विवाह गर्ने व्यक्ति चाहिँ आफूलाई बुझ्ने, माया गर्ने, जिम्मेवारीपन भएको, पारिवारिक, समान ब्यबहार गर्ने, श्रीमतीलाई घरको काममा मात्र हैन बाहिरी काममा पनि अघि बढ्न प्रोत्साहान गर्ने व्यक्ति हुँदा राम्रो हुन्छ । विवाहपूर्वको शारीरिक सम्बन्धमा मेरो धारणा यस प्रकार छन् कि, विवाहपूर्व कतिपय सम्बन्धहरु लामो समयसम्म टिकेको एकदम कम देखिन्छ र यसलाई हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा निकैनै चर्चा हुने विकृतिका रुपमा लिई आएको छ, त्यसैले म पनि यही समाजमा हुर्केकी हुनाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन उचित ठान्दिनँ ।
– यदि म केटा भएर जन्मेको भए महिलाहरुलाई अघि बढ्ने प्रोत्साहन दिन सहयोग गर्थें । त्यसका साथै म एउटा असल पुरुषको उदाहरण बन्न चाहन्थे ।
– त्यस्तो डाहा लाग्ने त कोही पनि हुनुहुन्न ।
– यदि मैले आफ्नो रूप फेर्ने वरदान पाएको भए म निकै नै चर्चित गायिका डाक्टर त्रिसला गुरुङको रुपधारण गर्न चाहन्छु ।
० घरमा झुट बोलेर कहिले कतै जानु भएको??
– मेरो भविष्यको लक्ष्य नै आफूले जुन काम गरेको छु त्यसमा राम्रो होस् भन्ने चाहना छ, त्यसका साथसाथै व्यापार व्यवसाय र मोड्लिङ क्षेत्रमा लाग्ने सोच छ ।
– मलाई मन लागेको तर गर्न नपाएको काम समाचार वाचन हो ।
– मलाई आफ्नो भावना र कुराहरू व्यक्त गर्न मौका दिनु भएकोमा तपाईं लगायत लुक्स नेपाल टीम एवम् फोकस फेसन हाउस लाई हृदय देखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै, म के भन्न चाहन्छु भने, आफू साथसाथै अरूलाई पनि खुसी, सहयोग, सदुभाव एवम् माया बाँड्न सकुँ भन्ने चाहना छ ।
प्रस्तोताः सोनी श्रेष्ठ/लुक्सनेपाल डटकम